लोकप्रिय गायक कुमार वस्नेतका कुरा एकातिर तथ्य आर्कैतिर ! - Dharahara Online
लोकप्रिय गायक कुमार वस्नेतका कुरा एकातिर तथ्य आर्कैतिर !
कुमार वस्नेत वाल्यकालदेखिनै सुनिदै आएको नाम । उनका गीत सुनेर हासु हासु लाग्थ्यो । उनका गीत सुनेर किसोर अवस्थामा नाचेको अहिले पनि याद छ । युवा अवस्थामा पुगेपछि उनको गीतका अर्थ पनि खुव खोजियो । कसै कसैले उनलाई लोकगीतको संम्राट पनि भन्छन् । उपाधी दिने काम दर्शक श्रोताकै हातमा छोडेर उनको मुल्यांकन गर्दा नेपाली भएर जन्मिएका थोरै राम्रा गायकको कोटीमा उनी सजिलै पर्छन् ।
लोकप्रियता र इज्जत पनि पाएका हुन उनको समयमा । समय सधै आफ्नो हातमा हुदैन । समयको प्रवाहसंग वग्न थोरै मान्छे मात्र सफल हुन्छन् । ति थोरैमा कुमार पर्न सकेनन । नेपाली संगीतबाट कुमार पुर्णत ओझेलमा छन् हिजोआज । नयॉ गीत उनका सुनीएका छैनन । यदाकदा पुराना गीतले नै उनलाई बचाएको भने छ ।
आज एक्कासी कुमार वस्नेतलाई सम्झेर युट्युभमा सर्च गरियो । उनका दर्जनौ गीत र अन्तरवार्ता देखियो । केहि वेर गीतको आनन्द लिएपछि उनका अन्तरवार्ता पनि सुन्ने जागर चल्यो । सुनियो पनि । राणा कालिन किस्सा , राजाका क़िस्सा खुव रोचक लाग्यो । निक्कै रमाईला र मिठा कुरा सुन्न पाईयो । २० को दशक प्रारम्भ नहुदै गायनमा देखा परेका उनका कुरा घत मानेर सुनियो ।
सुन्दै जादा एउटा अन्तरवार्तामा उनका पिडात्मक कुराहरु पनि सुनियो । निक्कै आक्रोश र मार्मिक पाराले उनले बोलेको देखेर उनका कुरामा निक्कै ध्यान गयो । लोकगीतमा सफल मानिएका गायकको कुरो सुन्नैपर्यो । एल्बम निकालेर एक पैसा पनि नपाएको कुरो सुन्दा छक्क परियो । कम्पनीले ठगेको कुरो मार्मिक पाराले धाराप्रवाह बोलेको सुन्दा छक्क परियो ।
४० को दशकको अन्त्य तिर अल्बम प्रकाशन गरेका कुमारले आजसम्म १ सुको पनि पाईन भन्ने गुनासो सुन्दा हज्जारौ छक्क परे होलान । ५० को दशक देखिनै सुटेट बुटेट भएर मोटर साईकलमा सररर गुडेको देख्ने सबै छक्क पर्ने गरि उनको अन्तरवार्ता आईरहेको थियो । मन मनै सोचे ,’ हैन यि दाइ त सधै हसिला सुकिला मुकिला नै देख्दै आएको , सरकारी जागिरे , अनुहार सधै तेजिलो १ सुका पनि कमाई नभए पछि त्यति वेला नै किन कुरो उठाएनन ?’
उनका गीत सुनेर हुर्किएको म उनलाई ५० को दशकमा देखभेट भए पनि २०६१ सालमा मात्र उनको अन्तरवार्ता गर्ने मेलोमेसो मिलेको थियो । त्यतिखेर पनि निकै राम्रो र सकारात्मक कुरा अन्तरवार्तामा भनेका थिए । संगीतको वारेमा निक्कै रोचक र मिठा कुरा गरेका थिए । अहिले कम्पनीको बिरोधमा बोल्ने कुमार दाईले त्यतिखेर म्युजिक नेपालको बारेमा खुलेर तारिफ गरेका थिए । त्यो अन्तरवार्ता ग्ल्यामर प्लस मा छापिएको थियो । म्युजिक नेपालसंग आवद्ध भएर काम गरेको कुरा पनि बताएका छन् ।
म्युजिक नेपालप्रतिको उनको आर्कोश बिशेष रुपमा हेरे । रोयल्टी , पारिश्रमिक, लगायत अन्य उनले उठाएको अरु कुरा पनि गम्भिर भएर सुने । प्रतिलिपि अधिकार समाजमै बसेर उनको अन्तरवार्ता लिने म । अहिले उनका कुरा सुनेर छक्क परेपछि उनको बिषयमा अनुसन्धान गर्ने निधो गरे । उनका गीतको अवस्था र कारोवारको विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरे । अनेकौ प्रयास पश्चात सबै डकुमेन्ट र केहि श्रोत बनाए पछि उनका कुरा र डकुमेन्ट अनि श्रोतले उपलब्ध गराएको सबै कुरा अनुसन्धान गर्दा कुमार बस्नेत झुट्टा देखिए ।
सोच्न वाध्य भए । पहिले पहिले सुनेका राणा, राजा अनि पुराना सर्जकसंग जोडिएका किस्सा पनि गफै मात्र पो हुन की ? आफुले गरेको कुरा त हैन भन्नेले ति कुरामा साँचों बोले होलान त ? जनताले माया गरेका रुचाएका यति ठुला सर्जकले यसरी झुट बोलीदिए पश्चात समाजमा कस्तो असर पर्ला ? सोच्नु पर्दैन ?
कुमार बस्नेतका गीतहरु प्राय रेडियो नेपालकै लगानीमा बनेका थिए । केहि गीतमा उनकै निजी लगानी पनि छ । केहिमा म्युजिक नेपालको पनि देखिन्छ । रेडियोमा रेकर्ड भएका गीत उनी आफैले रेडियोका कलाकार साथीहरुमार्फत लिएर म्युजिक नेपाल पुराएको देखिन्छ । प्रतिलिपि अधिकार समाजमा कार्यकारिणी पदमा रहिसकेका उनलाई यसरी अरुको प्रतिलिपि अधिकार हनन गरेर गीत निकाल्न कुन नैतिकताले दियो होला ?
आफुलाई रेडियो नेपालबाट गीत लगेर एल्बम निकाल्ने सल्लाह गायक संगीतकार राम थापाले दिएको बताउने कुमार बस्नेतले एल्बमबाट एक सुको पनि कमाइ नभएको र नपाएको बताएका छन् । तर उनले २०५० सालदेखि २०७४ सालसम्म म्युजिक नेपालबाट पटक पटक रक़म बुझेको अभिलेखबाट देखिन्छ । हेर्नुस उनले गरिदिएको भरपाई-
म्युजिक नेपालसंग गरेको करारनामा हेर्ने हो भने कुमार वस्नेतले आफ्ना गीत म्युजिक नेपाल रहेसम्म क़ायम रहने गरि सम्झौता गरेका देखिन्छन् । फेरि रोयल्टी पनि तोकिएको छ । करार अलि अमिल्दो देखिए पनि यसले समस्या ल्याएको दिन आपसी कुराकानीमा रद्द गर्न कानुनले छेक्दैन । करार मुताबिक़ पैसा नपाएको खण्डमा जहिले पनि कानुनी कार्यवाही गर्न सकिने अवस्था रहन्छ नै । म्युजिक नेपालले करार बमोजिम कुमार वस्नेतले मागेको दिन हिसाव मिलान गर्ने गरि रक़म बुझाएको देखिन्छ ।
तर अन्तरवार्तामा कौडी पनि नपाएको कुरो उनले बोलेका छन् । आफुले बुझेको पाएको रक़म यति छ भनेर भन्न किन केले गाह्रो बनायो उनलाई ? यति लेकप्रिय कलाकारले यसरी झुट बोलेको सुहाउदैन ।जे हो जस्तो हो त्यहि बोल्न सक्नु पर्छ उनले । परिस्थिति र महौल हेरेर बोल्दा अन्तत आफै हो खाल्डोमा पर्ने ! बोल्न उक्साउनेहरु त विवाद पर्न थालेपछि दुला पस्छन् । उनले यति कुरा त बुझ्नु पर्ने ।
एउटा प्रश्नको उत्तरमा मैले म्युजिक नेपाललाई सिडी निकाल्न दिएको होईन भनेका छन् कुमार वस्नेतले । अझ एक ठाउमा त सम्झौता नै भएको छैन पनि भनेका छन् भने आर्को ठाउमा क्यासेट निकाल्न मात्र दिएको भनेका छन् । तर म्युजिक नेपालसंग भएको संम्झौतामा सिडी नै लेखिएको छ । हेर्नुस सम्झौता पत्र –
८० लाख रेकर्ड बिक्री भएको उनको दावी छ । तर अवस्था त्यस्तो देखिदैन । उनका गीत लोकप्रिय हुन् । रेडियोको जमानामै ति लोकप्रिय रहे । श्रोताले मनपराए । गीत लोकप्रिय रहेको बेला एल्बम आएन । पछि लोकप्रियता कम रहेको अवस्थामा तिनै पुराना गीत एल्बममा संग्रहित गरेर ल्याउदा पहिलो जस्तो लोकप्रिय रहन सकेन । जति बिक्यो संग्रह गर्न चाहानेले मात्र किने । उनको गीत कति बिक्री भए कारोवार कस्तो छ ? यि तलका कागजातले देखाउछ। हेर्नुस काग़ज़ात –
क्यासेट ,सिडी, भिसिडी, युट्युभ लगायत सबै ठाउमा उनका गीतले गरेको कारोवार यि सुचीहरुले स्पस्ट देखाएका छन् । रकम पनि देखिएको छ । हिसाव र कारोवारमा चित्त नबुझे सप्रमाण हक़ दावी प्रस्तुत गर्न सकिने आधार छ । कुनै पनि आधार र प्रमाण सम्बन्धित ठाउमा पेश नगरी मिडियाबाजीमा उनी उर्लेका देखिन्छन् । मिडियामा आउदा पनि सप्रमाण यो यो कारण र आधारले म ठगीमा परे । यसरी मेरो वैद्धिक सम्पति हिनामिना भयो भनेको भए कुरो आर्कै हुन्थ्यो । तर सुनेको र लहै लहै मा म्युजिक नेपाललाई सबैले पेले मौका यहि हो पुरानो तुष साध्ने बेला भनेझै गरेर उनी जोसिएको देखियो । यो केटाकेटी पन भयो । उनको कुरामा कुनै दम देखिएन ।
एउटा व्यवसायिक कलाकारले कुनै पनि कम्पनीलाई व्यापार गर्न दिएपछि बढि भन्दा बढि ठाउमा बेच भन्नु पर्छ । गीत बिक्दा आफुलाई पनि फाईदा हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु भएन । कुमार वस्नेत माथी म्युजिक नेपालको पनि लगानी छ भन्ने कुराको प्रमाण यो काजलले देखाउछ । हेर्नुस यो कागज –
आफ्नो व्यक्तिगत कुरोमा राम थापालाई पनि मुछेका छन् उनले । राम थापा रोगले थलिएर उपचार गर्दा गर्दै निधन भएका हुन् । तर यों असामयिक निधनलाई पनि अतिरन्जित गर्ने काम कुमार बस्नेतलाई सुहाउदैन । राम थापा आफ्नो स्वभीमानमा रहेर बिंदा भएको सबैले देखेका छन् ।
अर्को अनौठो कुरो कुमार वस्नेतको कारोबार गर्ने शैली पनि राम्रो देखिएन । आफुलाई जतिबेला जति रक़म चाहिन्छ म्युजिक नेपालमा करकर गरेर पेश्की स्वरुप पैसा झिकेको देख्दा अचम्म लागेको छ । काठमाडौमा राम्रै संग जमेर बसेका कुमार वस्नेत जस्तो गायकले त वार्षिक रुपमा सानसंग म्युजिक नेपालमा गएर एकमुष्ठ रकम बुझ्नु पर्थो । यसमा उनी नराम्रोसंग चुकेका छन् । यों कारोवार गर्ने शैलीले नेपाली कलाकारहरु को शिर झुकेको छ ।
कुमार बस्नेत जस्तो लोकप्रिय कलाकारले पनि यसरी झुटो बोलेपछि अब कोसंग सत्य तथ्य को आशा गर्ने? उनले बताएका आफ्नै इतिहासलाई पत्ताउने कि नपत्ताउने सोच्नु पर्ने अवस्था आयो । उनका कुरा एकातिर छ तर तथ्य आर्कै तिर देखिन्छ। पत्ताउने नपत्ताउने पाठक तथा संगीत अनुरागीकै हातमा ।
संगीतमा उठेका भ्रम र यथार्थ